Impembelelo yesikali sombala kumgangatho wokuphumla
Xa sifikile ekhaya emva komhla omude kunye onzima ukusebenza ukhathele kwaye udinwe, sidinga ukuphucula kunye nokuphumla okupheleleyo. Nangona kunjalo, nantoni na esiyenzayo emva komsebenzi kwiiyure zokuhlwa, ekubeni ekhaya, umbala webala lobungaphakathi unempembelelo enamandla kwiholide lethu. Le nyaniso sele iqalwe ngokucacileyo ngabaphathi beengqondo. Ngoko ke, ukuze sibuyisele ngokugcwele amandla ethu kwaye senze into evuyayo, kuya kuba luncedo kuthi sicinge ngempembelelo yesikali sombala kwimpuma yokuphumla kwinkcazelo encinane.
Ukuze ukubuyisela amandla ngokufanelekileyo nokusebenza kakuhle, ngamnye wethu unendlela yakhe eyintandokazi yokuphumla ekhaya: umntu uphinde abuyele kwisitulo sesitulo esithambileyo phambi kwesikrini seTV, umntu uthetha ekhitshini ngenkobe yetiyi kunye nezihlobo kunye nabahlobo bakhe, kwaye umntu uthanda nje ukwenza zonke iintlobo zemisebenzi yasekhaya. Kodwa kuzo zonke iziganeko sisegumbini elihlotshiswe kwisikimu esithile sombala. Enoba siyayithanda okanye ayikho, iintlobo ezahlukahlukeneyo zangaphakathi zihlala zisenza impembelelo enkulu yengqondo kuthi, ngokunciphisa okanye ukuphucula umgangatho wabanye.
Ngoko, yintoni impembelelo ekhethekileyo ekuphumleni kwethu kunikezwa ngumhlobiso wombala wezinto zangaphakathi?
Masiqale nge nyaniso yokuba imibala eyahlukileyo ekhoyo iyakwahlula ngamaqela amabini: amathoni afudumele kunye nabandayo. Ukufudumala kwamathoni kunokuthiwa yi-yellow, i-orange, ukhilimu, i-shades ebomvu, kunye nokubandayo-eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, oonobumba obuhlaza. Kakade ke, ingaphakathi lisoloko lihlotswe ngombala owodwa, kwiimeko ezininzi umbala wombala wegumbi uququzelele i-shades kunye. Nangona kunjalo, rhoqo kwiindawo zangaphakathi, naluphi na umbala ophezulu ngokumalunga namanye amathoni. Yilo mthunzi obalawulayo umbala kwaye uza kuba nomthelela omkhulu kumgangatho weeholide lakho ngeli gumbi.
Imibala ehambelana nombala ekwazi ukufumana inzuzo kumgangatho womzimba emva kokusebenza kanzima imini ithathwa njengamazwi atshisayo. Eyona nto ingcono ngaphakathi kwendawo yokuhlala, apho uthanda ukuphumla emva komsebenzi onzima, ukuhlobisa iskimu sombala we-yellow-beige. Ezi zithunzi ziya kunceda ukukhawuleza inkqubo yokuphazamiseka kwaye ziyakuthonya ukubunjwa kwemihlali evuya. Ukongezelela, kukho enye into enomdla kakhulu kwaye inomdla kuzo zonke iitoni eziluhlaza okwesibhakabhaka: ukuba ulenga "ilinen ephuzi" kwikamelo lokulala, ngoko xa uvuka ekuseni emva kwephupha, nokuba imvula ishushu sezulu esitratweni, ukuba igumbi ngokusebenzisa ezi iiletyu lidlula kwimida yelanga. Akunakulungele ukubonisa ubungqina bokuba ukuvakalelwa okunjalo kuya kunceda ekuphuculeni umgangatho weeholide yakho. Zama ukusebenzisa le ndlela - kwinqanaba lezesengqondweni lisebenza ngokuthe tye!
Kodwa umbala obomvu awunakwenzeka ukuba uhambelane neendawo zangaphakathi kwigumbi lokuhlala. Nangona ukuba le mthunzi ibhekisela kwiitoni ezifudumeleyo, kuya kuba nefuthe elibi kumgangatho wokuzonwabisa. Ubungqina bokuba umbala obomvu kunye nokubonakaliswa kwexesha elide kubahlalutyi bethu ababonayo kubangela ukunyusa ukukhubeka kwaye kubangele ukukhutshulwa kwenkqubo ye-nervous, kwaye ukuphumla nokuphumla ngokuhlwa, ukuhlwaya okunjalo kuya kuba yinto engathandekiyo.
I-cold blue, i-blue shades kunye ne-green shades yesikimu sombala wezinto zangaphakathi iya kuba negalelo lokuthoba kwinkqubo yenzwa. Ukuba kwindlu ehlotshiswe ngemibala enjalo kuya kuba luncedo ngexesha lokugqibela emva kokuxabana emsebenzini. Nangona kunjalo, ukuhlala ngaphakathi kwegumbi, ehlotshiswe ngemibala ebandayo, akufanele kube yinde kakhulu. Ngaphandle koko, emva kokunciphisa imizwa yakho iya kuqala ukuhlakala kwaye ungeke usebenze ngentshiseko kwimisebenzi yasendlini - kunoko, uya kuhanjelwa ngumnqweno wokucinga yonke into eyenzekayo kunye nokucwiliswa okujulile kwiingcamango zakho.
Kwaye, ngokuqinisekileyo, akufanele uchithe ukuphumla kwakho ngaphakathi, uhlotswe kwiimpawu ezimnyama, ezimnyama. Olu hlobo lwemibala elubala luyakwenza kuphela ingcinezelo kwinkqubo yethu yeentlanzi, ngoko umgangatho wokuphumla kweli lixa luya kuba lubi kakhulu.
Ngaloo ndlela, ukhetha i-shade yeenkcukacha zangaphakathi kwindlu yakho, cinga kwangaphambili ngempembelelo yecandelo lombala weekamgangatho kumgangatho wabanye.
Iinqwelo eziphakamileyo ze-5 eziqhelekileyo kwiindawo zehlabathi
Xa ufuna ukuya eYurophu: khetha ixesha kunye nexesha
Imozulu eMoscow ngoFebruwari 2017 - I-Hydrometeorological Centre ibikezela
ISlovenia - ilizwe leenganekwane, iinqaba kunye neentaba
Konke malunga nesixeko saseNtaliyane se-florence
UMaslenitsa 2016: ukuphi na ukunyangwa ngalo nyaka
UMary Kate Olsen no-Ashley Olsen
Ikhekhe leshokoledi nge-iris
Umntwana wabethwa ngumfuyo wasekhaya okanye wasendle
Umvuzo "I ziqhamo"
Ilayisi nge sipinashi
U-Anna Slynko: "Lo mboniso uyindlela nje yokubonisa ibali"
Ngumhla woMhla weMida ngo-2016 eRashiya, eBelarus, Kazakhstan nase-Ukraine?
Indlela yokukhetha i-sofa elungileyo ngaphakathi kwegumbi
Ukutya okunciphisa i-cholesterol
Indlela yokugcina ifanelekileyo?